SPORTS | HOYGA WARARKA CAALAMKA | Page 3
Leicester City oo Horyaalka Ingiriiska Qaaday
Kooxda Leicester City ayaa markii ugu horreysay taariikhdeeda waxay ku guuleysatay horyaalka kubadda cagta ee Ingiriinska, kadib markii kooxda Tottenham ay barbar dhac la gashay Chelsea. Kooxda Leicester City oo la aas-aasay muddo haatan laga joojo 132 sano, guusha ay koobka ku guuleysatay uu u yahay mid taariikhi ah. Kooxdu waxay ka mid ahaan jirtay kooxaha yar-yar ee horyaalka, waxaana qeybta ...
Deg Deg: Macalinka Chelsea Jose Mourinho oo Shaqadii Laga Ceeriyay
War ah oo hada soo dhacay ayaa sheegaya in shaqadii Laga Cayriyey Macalinka Chelsea Jose Mourinho Kadib markii milkiilaha Naadigaas uu ku dhawaaqay arintaas, waxaana Macalinkaan Laga Cayriyey shaqada kadib markii ay ku dhacday sagaal Guuladaro Xiligaan. Waxaa beryahaan oo dhan Saarnaa Macalinkaan Cadaadis aad uga imaanayay Maamulka Kooxda. Kadib Markii shaqada laga Cayriyey Macalinkii Naadiga Chelsea Jose Mourinho ayaa ...
Mathieu Valbuena oo markii ugu horaysay la hadlay saxaafada iyo weerar uu ku qaaday Benzema.
(Paris) 27 Nof 2015 Laacibka kooxda Lyon Mathieu Valbuena ayaa markii ugu horaysay la hadlay saxaafada kadib dhacdadii dhexmartay isaga iyo dhawr laacib oo ka tisan xulka qaranka France oo uu ugu horeeyo Benzema. Mathieu Valbuena ayaa sheegay in Benzema uu yahay qof aan sharaf lahayn maadama uu gaxan siiyay dadkii isaga ka doonayay lacagta wuxuuna ku eedeeyay in Benzema uu masuul ...
Xiriirka France oo si ku meel gaar ah u joojiyey Taageerayaasha daawada Kubada Cagta.
November 26, 2015	Comments Off on Xiriirka France oo si ku meel gaar ah u joojiyey Taageerayaasha daawada Kubada Cagta.
(26-11-2015) Xiriirka Kubada Cagta dalka France ayaa Goordhow soo Saaray Go aan ay kaqaateen in aan la ogolaan doonin Taageerayaasha banaanka u raaca Kooxahooda Horyaalka dalka France kuwaas oo lamamnuucay si Ku meel Gaar ah. French League (LFP) oo ah kan Maamula Horyaalka dalka France ayaa sheegay in aan loo ogolaan doonin in Kooxaha u baxaya in ay lasoo dheeleen ...
Arsene Wenger oo ku dhawaaqay 2 Cayaaryahan ee uu soo qaadanayo bisha Janaayo
(26-11-2015) Macalinka Kooxda Kubada Cagta Arsenal Arsene Wenger ayaa shaaca kaqaaday 2 Cayaaryahan oo uu doonayo in uu soo qaato marka bisha janaayo 2016 ka kuwaas oo uu doonayo in uu ku buuxiyo boosas Cayaaryaahno khdaka dhexe ah oo ka dhaawacmay. Arsene Wenger ayaa doonaya in uu Xoogiisa oo dhan isugu geeyo sidii uu usoo iibsan lahaa Cayaaryaahanada kala ah Lars ...
James Wilson oo isaga dhaqaaqay Garoonka Old Trafford Sabab?
(26-11-2015) Kooxda Kubada Cagta Manchester United ayaa shaaca kaqaaday in ay amaah isaga direen Cayaaryaahnka Weerarka uga dheelayey ee lagu magacaabo James Wilson kaas oo inta kadhiman Xiligaan u dheeli doona Naadiga Heerka labaad ee Brighton . James Wilson ayaa Garoonka Old Trafford Waxa uu kawaayey boos Joogta ah waxaana 19 jirkaan oo ku wanagsan dhanka Weerarka uu doonayaa in uu isku soo xoreeyo ...
Yaa Hogaaminaya Gool dhalinta Koobka Champions League ee Xiligaan.
(26-11-2015) Waxaa Todobaadkaan ladheeley Kulamadii Shanaad ee Koobka Xiisaha badan ee Champions League Waxaana ladheeley Kulamo aad u xiiso badan iyada oo kooxaha qaar Xaqiijiyeen in ay usoo Gudbeen Wareega 16 ka halka kuwo kalana aysan weli Xaqiijin. Hadaba yaa Hogaaminaya Gooladhalinta Koobka Champions League sideese loo kala Horeeyaa. Champions League Top Scorers Rank Player Name Team Goals 1 Cristiano Ronaldo ...
Yaa Hogaaminaya Gool dhalinta Koobka Champions League ee Xiligaan+Sawiro
Marouane Fellaini oo Ganaax aad u adag Lasaaray Sabab?
(26-11-2015) Cayaaryahanka khadka dhexe uga dheela Kooxda Kubada Cagta Manchester United ee Marouane Fellaini ayaa lasheegayaa in lasaaray Ganaax aad u adag oo dhanka Wadisata baabuurta ah kadib markii Maxakamad lasoo taagay ayaana Laga ganaaxay Mudo aad u dheer. Marouane Fellaini ayaa Maxakamada Manchester Magistrates Court heard Waxa ay Galabnimadii Arbacada ku heshay dambi ah in uu si Xad dhaaf ah u ...
Sami Khedira oo kamqnaan doona Kulanka Man City
Cayaaryahanka khdaka dhexe ee kooxda Kubada Cagta Juventus ee lagu Magacaabo Sami Khedira ayaa lacadeeyey in uusan dheeli dooni Kulanka koobka Hopryaalada yurub ee Juventus iyo Manchester City. Sami Khedira ayaa dhaawac ku seegi doona kulanka adag ee koobka Horyaalada yurub Waxaana Xidigaan uu dhaawac kaqabaa dhanka muruqa kaas oo uu kuseegay kulankii AC Milan ee Xalay. Juventus iyo Manchester City ...